48 dia… boka? – Malag@sy Miray
Fomba fanisàna tamin’ny kilalao taloha ny hoe vingt-sept dia boka, mba ahitàna izay hitady na hanenjika na hitarika na hahazo anjara tsotra fotsiny ihany rehefa maro ireo ankizy mpilalao.
49 no isan’ireo nanatitra antontan-tanratasy hilatsahan-ko fidina ho filoham-pirenenan’i Madagasikara. Oay, 48, azafady, Noesorin’i Maître Avoko ny taratasy filatsahany noho ny fahitàny fa mety hampisy korontana ny hamaroan’ireo mpilatsaka ho fidiana. 48 olona, ao ny lahy, ao ny vavy. Misy ny efa fantatra sy malzalaza, isy kosa ireo tena mbola tsy fantatra mihitsy.
Anisan’ny tranga mahalasa saina ny maro ny filatsahan’i deba. Izay marihina fa toa sahirana raha mamindra na mijery fa dia toa tsy maintsy misy olona iray na roa foana mitantana azy. Dia sanatria fitiavan-tseza fotsiny ve sa mba maniry ny ho lasa « Mandela » malagasy koa? Asa re. Anisan’ny tsy mahataitra ihany koa ny filatsahan’ireo goaika antitra amin’ny fanaovana pôlifika, ireo efa fantatra ka mitsapa vintana na ho any na tsy ho any. Paik’ady politika amin’ny fihodinana faharoa hoe? Asa re… Maro koa ireo mpanam-bola izay mieritreritra fa rehefa manam-bola dia tokony ho lany. Mahereza ry zareo.
Fa ny tena tokony ampaherezina izany dia ireo olon’ny CES hisafidy ny amin’ireo izay ho voatazona na tsia hilatsaka ka afaka manomana soa aman-tsara ny fampielezan-keviny. Mety hampiteraka korontana sanatria raha tsy mahay mandanjalanja tsara. Mila ampaherezina koa ireo olona hifidy, indrindra fa ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra na ireo somary ratsiratsy maso ka mety ho sahirana amin’ny fampiasana ny « bulletin uniqu » raha izay ihany no ho ampiasaina.
Ho tazonina « bulletin unique » ihany moa izany ny ho ampiasaina amin’ny fifidianana sa dia hiverina amin’ny fomba fanao fahiny izay handraisana taratasy maromaro amin’ireo mpilatsaka ary isafidianana amin’izay tiana sy hanariana ao anaty sobika ireo izay tsy tiana?
Hanao ahoana koa ny fomba fametrahana ny anarana amin’izany « bulletin unique » izany raha ohatra ka io no ho ampiasaina? arakaraka ny filaharan’ny anarana ao amin’ny abidy ve sa arakaraka ny fametrahana ny antontan-taratasy sa ohatra ny amin’ny hazakazaka fiarakodia ka izay efa fantatra fa efa teo foana no alefa aloha?
Asa re!! fa raha izao no mitohy dia ho 27 dia boka no ady eo ho an’izay tsy manan-tsafidy ka niandry an’i dada na zandrikely (i mama mantsy toa tsy ho avela hirotsaka satria tsy ampy enim-bolana no nahateto Madagasikara azy ary mety ho toy izay koa ny amiraly sy ireo sasantsasany amin’ireo olona tsy dia fantatra loatra.
io ary fa nilatsaka ilay iray domelina fa tsy nisy nahita izay nidirany.